Mabhuku akanakisa emashiripiti | Zvazvino Zvinyorwa
Akanakisa emashiripiti echokwadi mabhuku
Alberto Makumbo | | Vanyori, Type, Literature, Novela, dzakawanda
Kunyangwe nyika zhinji nevanyori vakabatanidza fungidziro uye chokwadi munhoroondo yese, mashiripiti echokwadi akabuda sechiratidzo cheLatin American zvinyorwa uye gare gare akawedzera kune nyika dzese. Iko kugona kusanganisa kurota uye hupenyu hwezuva nezuva kuburikidza neizvi akanakisa mashiripiti echokwadi mabhuku izvo zvinotidzosera kumataundi iwaya emidzimu inodzungaira uye inotambudza mhuri.
2 Aura, naCarlos Fuentes
3 Makore Mazana Ekusurukirwa, rakanyorwa naGabriel García Márquez
4 Imba yeMweya, naIsabel Allende
5 Semvura yechokoreti, naLaura Esquivel
6 Kafka paMahombekombe, naHaruki Murakami
7 Vanakomana vepakati pehusiku, naSalman Rushdie
8 Anodiwa naToni Morrison
Muna 1953, Mexican Juan Rulfo yakaburitswa nhevedzano yenyaya dzakaiswa mutaundi rekunyepedzera reComic pasi pezita El llanero en llamas. Sketch yekutanga yezvinhu zvisinganzwisisike zvakasikwa zvinoenderana Pedro Paramo, imwe yemanoveli akasimbisa mashiripiti senge rudzi rwevanhu vazhinji uye izvo zvakanyorwa mumwedzi mishanu chete nemunyori. Yakabudiswa muna 1955, nyaya yacho inotaura nezvekuuya kwejaya iri John Precious kuguta riri muComala uko kunorara baba vake, Pedro Páramo. Kunyarara mumakona uye nyaya dzekare dzevanhu dzinouya kudzikira simende iyi nhoroondo inoonekwa seimwe ye iwo epamberi mabhuku eLatin american tsamba.
Aura, naCarlos Fuentes
Yakagara muMexico City muna 1962, Aura tevera mumakwara aFelipe Montero, mudiki wezvenhau uyo ​​anosarudza kubvuma basa rekupedzisa ndangariro dzevazhinji vanogara mumba make chaimo. Kwemwedzi, achagara nemukadzi wake, Consuelo, nemuzukuru wake, Aura, vakadzi vaviri vanogara vakanyura murima kuitira kuti varege kuziva imba inovayeuchidza zvakanyanya nezvemunhu anorwara. Rwendo rwekunyepedzera kuburikidza nezvido, makakatanwa uye nerima zvinangwa zvevanhu varo uko pasina kushomeka kwetsika dzekunamata uye zvishuwo zvakavanzika. Imwe yenyaya dzinoyeukwa kupfuura dzose dzaCarlos Fuentes iyo yakaburitswa mukati mekupisa kwenzvimbo yekubikira yehunyanzvi.
Vanoti pakanyora bhuku rino Gabo, aive abhuroka. Akatengesa mota yake, akapotera mufurati muMexico City uye, pakupedzisira, akatumira chinyorwa kunyorwa yekutsikisa yeSudamericana muna 1967. Izvo izvo Mubayiro weNobel waisakwanisa kuona yaive kubudirira kukuru , que Makore zana okusurukirwa ruzivo mukati memavhiki ekutanga ekuburitswa uye, ndoda, mamiriro e hunyanzvi hweLatin American zvinyorwa zvaizosvika pakupedzisira. X-ray yekondinendi yemashiripiti, mhuri uye zvekune dzimwe nyika zvinokanganisa, nhoroondo ye mhuri yeBuendía uye taundi reMacondo rakava dombo repakona reLatin American boom rakatora nyika muma60.
Imba yeMweya, naIsabel Allende
Chilean nekuzvarwa uye veVenzuelan nekutorwa, Allende aigara achiziva kuruka chokwadi chekondinendi yake, uye zvakanyanya nezveChile, achivasanganisa nemashiripiti ehunyanzvi hwemashiripiti ino novel yakaburitswa muna 1982 kusvika mukubudirira kukuru uye kuruzhinji rwevanhu. Imba Yemweya inotizivisa ku zvizvarwa zvina zvemhuri yaVa Trueba uye nyaya dzavo dzakapindirana nezviitiko zvematongerwo enyika zvinotambudza postconial Chile. Inofungidzirwa iro rakamiririra basa remunyori, novel yaive firimu inoenderana muna 1994 nyeredzi Jeremy Irons, Meryl Streep naAlexander Banderas.
Pazvakaita sekunge "kupenga" kwehunyanzvi mashiripiti kwakapera, kwakauya Semvura yeChocolate kupa icing inodiwa. Kufamba netsika yeMexico kupinda mukicheni uye muridzo kumashiripiti avo, bhuku raLaura Esquivel rakaburitswa muna 1989 yakava mutengesi mukuru nekuda kwekushandisa kwezvakanaka zvigadzirwa: nyaya yerudo mushanduko yeMexico, mutambo wemukadzi asina kodzero yekuwira murudo uye mapepanhau akanaka eMexico kuhwina vadikani nevaverengi. Chikamu chechipiri chebhuku, Dhayari raTita, rakabudiswa muna 2016.
Kafka paMahombekombe, naHaruki Murakami
Ehe, mashiripiti echokwadi anomiririra Latin Latin mavara, asi izvo hazvireve kuti vamwe vanyori kupota pasirese havana kugadzirisa kusangana kwe mashiripiti uye chokwadi muzvinyorwa zvake. MuJapan Murakami ndiye muenzaniso wakanakisa, achipatsanura bhuku rake rezvinyorwa kuva enganonyorwa dzepedyo uye nevamwe vanotamba nemayunivhesiti epasi. Yake 2002 novel Kafka pamhenderekedzo ingangove inoverengeka inomutsa zvakanyanya iyo inonakidza nyika kuburikidza nemaziso e vatambi vaviri nenyaya dzavo dzakasiyana: Kafka Tamura, mukomana ane makore gumi nemashanu anofunga kusiya imba yemhuri kunopotera muraibhurari, naSatoru Nakata, murume akwegura anokwanisa kutaura nekatsi. Zvakakosha.
Vanakomana vepakati pehusiku, naSalman Rushdie
India Ndiyo imwe yenyika dzakasarudzika mupasi iro mashiripiti uye zvekunamata zvine hunhu mukuzvibata kwevanhu vayo. Nekudaro, isu hatisi kushamiswa nekutambisa kwemafungidziro ayo nyaya dzaRushdie dzinopa, kunyanya Vana vepakati pehusiku. Nhoroondo yakaiswa pakati pehusiku munaAugust 15, 1947, zuva iro India yakawana rusununguko kubva kuBritain Humambo uye mune iyo Saleem Sinai, protagonist wenyaya, akauya munyika. Kubudikidza nenyaya yake, yemwana anovandudza kugona kuziva, isu tinopupurira nhoroondo ichangopfuura yeIndia uye chizvarwa chitsva chinoda kudzoreredza iyo nyika inopokana nepfungwa dzevafambi nevaverengi.
Anodiwa naToni Morrison
Yakatumirwa muna 1987, Beloved es inoverengera yakatsaurirwa kune avo "mamirioni makumi matanhatu uye kupfuura" varanda vezvizvarwa zvemuAfrica uyo akafa mushure mekuremerwa mhiri kweAtlantic. Zvakaitika kare zvinomiririrwa naSethe, murandakadzi anosarudza kutiza nemwanasikana wake kubva kumunda weKentucky kwavanogara muhuranda kusvika kuOhio, nyika yakasununguka. Iwo mweya uye zvinotyisa zvehondo yehondo iyo inotaura nezve izvo zvese zvinyararire izvo kwemakumi emakore zvakanyudza varume vane hutsinye uye kunyangwe mabhuku pachawo. Yakabudiswa muna 1987, nganonyorwa yakahwina Mubayiro wePulitzer gore rakatevera uye rakashandurwa kuenda kubhaisikopo naOprah Winfrey muchinzvimbo chaSethe, hunhu zvakare hwakavakirwa pamuranda Margaret Garner.
Ndeapi ari ako akanakisa mabhuku ezve mashiripiti chaiwo awakaverenga?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Literature » dzakawanda » Akanakisa emashiripiti echokwadi mabhuku
Iyo Inopisa Ranger akadaro
Burlan Llanero haana kumboenda kuComala, kusvika makumi mashanu nemashanu payakavambwa, aive aine 55 degree kutsva. Bani, kune rumwe rutivi, kwete nekuti harina kukwanisa kufamba.
Pindura Iyo Inopisa Ranger
Lorena Franco. 11 mibvunzo yemunyori waElla Knows